Saif al-Islam “ma heli doono” cadaalad | Subulaha News Network
You are here : Subulaha News Network » NEWS » Saif al-Islam “ma heli doono” cadaalad
Saif al-Islam “ma heli doono” cadaalad
Posted by admin on July 6th, 2012 05:22 PM | NEWS London(Subulahanews)-Qareen ka socota Maxkamadda dambiyada ee adduunka ayaa sheegeysa in wiilka uu dhaley hogaamihii hore ee Libya Mucammar al-Qadafi, Saif al-Islam, uusan heli doonin maxkamad cadaalada ah.
Gabadhani Melinda Taylor ayaa hadleysey maalmo kadib markii laga soo daayey xabsi ku yaalla magaalada Zintan ee dalka Libya.
Waxay sheegtey in aanay suura gal ahayn in Saif al-Islam uu helo maxkamad madax banaan.
Mas’uliyiinta dalka Libya ayaa dhowr jeer oo hore sheegey in Saif al-Islam la soo taagi doono maxkamad caddaalad ah.
Gabadhani qareenka ah ayaa dalka Libya lagu hayay muddo sadex toddobaad ah, waxaa loogu shakisnaa jaajuusnimo.
Maxkamadda dambiyada ee adduunka ayaa sheegtey in ay baari doonto eedeynta dowladda Libya.
Taylor ayaa sheegtey in ay u dhaqmeysey si waafaqsan sharciyada maxkamadda dambiyada.
Saif al-Islam oo la filayey in aabihii uu xukunka ka dhaxlo ayaa la soo qabtey bishii November ee sanadkii hore, sadex bilood kadib markii xukunka dalkaasi ay qabsadeen mucaarad ka soo horjeedey xukunka aabihii.
« Mareykanka oo xaiyraad kusoo rogay Saraakiil Eriteriyaan ah oo lagu eedeeyay inay taageereen Al-shabaab
Wasiir Duur, Cabdi Aw Daahir iyo Xildhibaan Waabeeye oo shirka Daallo hortiisa Saamaxaad ku weydiistay Casayr C/qaadir oo ay walaalo yihiin Cabdiraxmaan Cabdiqaadir »